Malezia: Mandràra boky iray maha-be resaka ny Ministeran’ny Raharaha Anatiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2010 11:54 GMT
Sary avy amin'ny bilaogin'i Magick River
Noraràn'ny Minisiteran'ny Raharaha anatiny ao Malezia ny bokin'ilay mpanoratra, Kim Quek, mitondra ny lohateny “ Ny Diabe ho any Putrajaya – Akaiky ny Vanim-potoana Vaovao ho an'i Malezia (The March To Putrajaya- Malaysia's New Era Is At Hand)” araka ny Lalàna mifehy ny Asa Printy sy ny Famoahana nivoaka tamin'ny 1984 noho izy io ‘mety hitarika ny vahoaka hifankahala sy hisafoaka’.
Ny pejy fandraisan'ny gazety anaty aterineto The Malaysian Insider dia nitatitra fa ny Sekretera Jeneralin'ny Ministeran'ny Raharaha Anatiny, Mahmood Adam, dia nilaza fa izany boky izany dia noraràna satria tsy mitombina ny fiampangàna ataony mahakasika ireo mpitantana ambony eo amin'ny firenena, ankoatry ny zavatra hafa. Tonga ihany koa hatramin'ny fanampiany fa ‘ny fanontàna printy, ny fanafàrana, famerènana manonta, fivarotana, fanapariàhana ary faniriana hivarotra, na ny fanànana ny boky toy izany dia zavatra azon'ny lalàna saziana’.
Setrin'izany dia namoaka fanambaràna an-gazety i Kim Quek nandàvany nyfilazana ny bokiny ho tsy sahaza ho an'ny daholobe.
Any anatin'ilay bokiko, isan'ny foto-kevi-dehibe iantsoako ny tsirairay ny hifikirana sy hiarovana ny Lalampanorenana. Na dia amin'ilay Artikla 153 diso nolokoina politika be loatra aza, izay niniana nodisoina tsotra izao ny fomba fandray azy ary nentina tamin-karatsiam-panahy ho any amin'ny resaka fanavakavahana ara-piaviana ka nanjary nitarika ho amina fisalasalàna maro, dia teny fanindrahindrana azy io fotsiny no nataoko tao.
Raisiko an-tànan-droa izay rehetra mety ho fanakianana ary resaka ankitsim-po mikasika izay rehetra ao anatin'ilay bokiko, satria amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-dresaka am-pahendrena sy am-pahamatorana no hitondrantsika tombontsoa ho an'ny firenena.
Manoloana ny fandraràna ny bokiko nataon'ny Ministera, tànako ny zoko handray ny fepetra rehetra ilaina araka ny lalàna mba hiarovako ny zo nomen'ny Lalampanorenana ahy.
Amin'izao fotoana, mibahan-toerana ao amin'ny tontolon'ny fitorahana bilaogy ireo mpitoraka bilaogy mametraka rohy mankany amin'ny tranonkala iray vao noforonina omaly izay azo amakiana sy isintonana ilay boky. Marobe ihany koa ireo nandray ny Twitter ho fanapariahana ilay rohy. SUARAM, fikambanana iray , Maleziana, miaro ny zon'olombelona, dia namoaka fanambaràna tao amin'ny bilaogin-dry zareo, manakiana ny fihetsiky ny Ministeran'ny Raharaha Anatiny.
Tsy manaraka ny làlan-tsaina tokony ho izy ny Ministeran'ny Raharaha Anatiny no sady miaro tena amin'ny fampifandraisana ny kiana atao amin'ny governemanta eo amin'ny fitondrana amin'ny fisavoritaham-bahoaka rehefa injay ny fanakiana ireo eo amin'ny fitondrana ka màka endrika demokrasia misosa.
SUARAM mino fa tsy misy boky tokony ho raràna izany mba hiantohana ny fivezivezen'ny hevitra maro, ary ny vahoaka dia tokony halàlaka hitady sy handray azy ireny.
Indray mandeha indray, antemantemaka ihany ny fampihàrana ny lalàna ary nararaotin'ny fanjakana ho toy ny fitaovana politika hanamafisana toerana toy izay hoampiasaina amin'ny fiahiana ny filaminana ara-tsosialy.
Tokony hanàja ny Artikla (10) amin'ny Lalampanorenana Federaly ny governemanta ary ny Artikla (19) amin'ny Fanambaràna Iraisam-pirenena momba ny Zon'Olombelona [Universal Declaration of Human Rights(UDHR)] izay milaza mazava tsara fa, manan-jo haneho hevitra sy hiteny an-kalalàhana ny tsirairay; ao anatin'io zo io ny fahalalàhana màka firehana tsy misy mpanelanelana sy ny fikarohana, fandraisana ary fanapariahana vaovao sy hevitra maro amin'ny alàlan'ny fitaovan-tserasera tsy voafetran'ny sisintany.
Bilaogy iray hafa, Hornbill Unleashed, ihany koa no mino fa tsy mitombina ilay fandraràna.
Ny firenena iray izay ny mponina ao aminy dia fahànana fotsiny amin'izay vaovao avoakan'ny fanjakana ho azy – ary tsy misy zavatra hafa ankoatra izay – dia firenena mihemotra ka voaozona hikorosy fàhana ao anatin'izao taonan'ny vaovao sy ny fanatontoloana izao.
Raha mijery ny maneran-tany isika, ireo firenena izay kilasiana ho tena misongadina fa tsara sy deraina ny fahombiazany ara-tsosialy sy ara-toekarena dia ireo fiarahamonina manana fampahalalam-baovao malàlaka. Amin'ny alàlan'ny fivezivezena malàlaky ny hevitra marolafy no tena ahafahan'ny saina mivoatra. Ary ny hatsaràn'ny saina no tena mamaritra ny taham-pivoarana na fikororosin'ny fiarahamonina.
Ny fanavaozana tena izy dia ny famongorana ny kolikoly sy ny fanamparam-pahefana, ary ny fanoloana ireo zavatra ratsy amin'izay tsara. Ary moa ve misy fomba tsara hanatràrana an'izany ankoatry ny famelàna ny fampitam-baovao hiasa malàlaka mba sady ho toy ny mpiambina mpanara-maso no ho taninketsan'ny hevi-baovao tia famoronana? Raha tsy ohatra angaha, mazava ho azy, misy finiavana mihitsy tsy hametraka politika hialàna amin'ny fahafenoana entin'ny kolikoly sy ny fikororosiana.
i Malezia dia firenena iray ahitàna lalàna henjana manivana ny fampahalalam-baovao, ary faha-131 ny laharany tamin'ny taona 2009 tao anatin'ny tondro ao anatin'ny Gazetin'ny Fahalalàhana an'ny Reporters Without Borders / Reporters Sans Frontiers / Mpitatitra Tsy Manan-Tsisintany.
Azo tsidihana eto ny rohy mankany amin'ilay boky.